झापामा भुतको आतंक : ४ घरलाइ लक्षित गरी ढुंगा प्रहार , घटना स्थलमा देखियो यस्ता दृश्यहरु (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
झापामा भुतको आतंक : ४ घरलाइ लक्षित गरी ढुंगा प्रहार , घटना स्थलमा देखियो यस्ता दृश्यहरु (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki June 19, 2019
झापा । झापाको बिर्तामोडको चारपाने २ मा आइतबर रति ८ बजे भुतले ढुङ्गा हान्छ तर्साउँछ भन्दै स्थानिय त्रसित भएका छन् । चार घरलाइ लक्षित गरि आइतबार राती ढुंगा हानेपछि परिवारमा त्रास उत्पन्न भएपछि प्रहरीलाइ खबर गरेको परिवारले जनाएका छन् । प्रहरी टोलि घटना भए ठाउमा आउँदा पनि ढुंगा प्रहार भएको कुरा त्यो परिवारले जनाएको छ ।
ढुंगा प्रहार भुतले नै गरेको जस्तो लाग्छ भन्दै परिवारहरु त्रसित भएका छन् । सोमबार पनि ढुंगा प्रहार भएपछि धामी झाक्री राखेपछि ढुंगा प्रहार भएको छैन भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । बास्तममा त्यो घटना कसरि घट्यो त ? के भुत ले नै रात दिउसो ढुंगा प्रहार गरेको हो त ? अथवा कुनै व्यक्तिले डर देखाउन लुकेर ढुंगा प्रहार गरेको हो ? तल भिडियोमा के के भएको हो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला ।